Ciyaaryahanka Qadka Dhexe Uga Ciyaara Kooxda Chelsea Jorginho Oo Doonaya Inuu Sii Joogo Stamford Bridge
HomeWararka Ciyaaraha MaantaCiyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Chelsea Jorginho oo doonaya inuu sii joogo Stamford Bridge
Ciyaaryahanka kooxda Chelsea Jorginho ayaa ku faraxsan garoonka Stamford Bridge laakiin ku laabashada Serie A ayaa laga yaabaa inuu xiisenayo waqti uun, sida laga soo xigtay saaxiibadiisa.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa lala xiriirinayay inuu u wareegayo xagaaga laakiin waxa uu doortay inuu sii joogo oo uu u dagaallamo booskiisa kooxda, go’aankaas oo inta badan ku guuleystay iyadoo xiddigu uu helay waqti badan oo uu ku ciyaaro Frank Lampard ololahiisa.
Jorginho ayaa 17 kulan u saftay Chelsea tartamada oo dhan ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan, waxaana ay u muuqataa inuu ka tagayo Stamford Bridge ma ahan wax ay isaga ama Chelsea ka fiirsanayaan bishaan.
Wakiilka ciyaaryahanka qadka dhexe Joao Santos ayaa u sheegay Mirror: “Waxay u aheyd sanad wanaagsan Jorge, wuxuu sifiican uga soo shaqeeyay xulka sidoo kale.
“Sannadka soo socda waxaa jiri doona Koobka Qaramada Yurub, halkaasoo uu rajeynayo inuu si fiican ula qabsado Italy.